प्रधानन्यायाधीश राणाले लिए शपथ, ८ फोटोमा हेर्नुहोस् राष्ट्रपति भवनको चहलपहल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रधानन्यायाधीश राणाले लिए शपथ, ८ फोटोमा हेर्नुहोस् राष्ट्रपति भवनको चहलपहल
काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइबाट मंगलबार अनुमोदित भएका प्रधानन्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । बुधबार बिहान राष्ट्रपनि निवास शितलनिवासमा राणाले शपथ लिएका हुन् ।
शपथ ग्रहण लगत्तै राणाले सर्वोच्च अदालत पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन् । उनले मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो ।
उनले आफूले पेश गरेको १५ पृष्ठ लामो अवधारणपत्र एवं कार्ययोजना दृढतापूर्वक कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समिति समक्ष व्यक्त गरेका छन् । उनले अनुहार कुरुप हुने गरी न्यायालयबाट नबाहिरिने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको २८औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नियुक्त हुन लागेका राणाको कार्यकाल झण्डै चार वर्ष रहनेछ ।